Nifarana am-pilaminana ny fitokonan’ny mpiasan’ny casino, fandresen’ireo mpiaro ny zon’ny mpiasa ao Kambodza · Global Voices teny Malagasy
Nifarana am-pilaminana ny fitokonan'ny mpiasan'ny casino, fandresen'ireo mpiaro ny zon'ny mpiasa ao Kambodza
Voadika ny 13 Janoary 2020 5:01 GMT
Hetsi-panoherana manoloana ny Naga hotel. Saripika avy amin'ny Foibe Kambojiana misahana ny zon'olombelona, nampiasaina araka ny lisansa CC.
Tsy mahazatra any Kambodza izany fandresen'ny mpiaro ny zon'ny mpiasa izany raha nifarana am-pilaminana ary mety hahomby ny fitokonan'ny mpiasan'ny casino lehibe indrindra ao amin'ny firenena, dia ny NagaWorld, taorian'ny fanapahan-kevitry ny fitantanana hampiakatra ny karama sy hamerina amin'ny asany ny filohan'ny sendikà.
Mamelona ny foiben'ny casino lehibe indrindra ao an-drenivohitr'i Kambodza ao Phnom Penh ny NagaWorld, izay an'ny orinasa ao Hong Kong NagaCorp. Niroborobo tokoa tao anatin'ny taona vitsivitsy ny casinos izay Shinoa no tompony ary mikendry manokana ireo mpizaha tany avy any Shina tanibe, izay voarara amin'ny fomba ofisialy ny filokana. Izao fivelarana ara-toekarena izao no mitaratra ny fitomboan'isan'ny fampiasambola shinoa ao amin'ny firenena, sy ny politika pro-Shina tanterahan'ny government kambojiana amin'izao fotoana, tarihan'ny Praiminisitra Hun Sen, izay efa mihoatra ny telopolo taona sahady no teo amin'ny fahefana.
Tamin'ny voalohany ny mpiasa nangataka ny hampakarana ny karama, tamin'ny septambra 2019 izany. Ny valiny avy amin'ny fitantanana dia ny nampiatoana an'i Chhim Sithar, filohan'ny sendikà.
Tamin'ny desambra ny sendika nandrotsa-bato ny hanaovana fitokonana ao anatin'ny iray volana, ary nandefa filazana tany amin'ny fitantanan'ny orinasa, tany amin'ny polisy ary tany amin'ny fiadidiana ny tanàna (governemantan'ny tanàna).
Na dia teo aza ny fitandremana ara-pitsarana noraisin'ny sendikà, dia namoaka didy ny fitsarana tao Phnom Penh tamin'ny 8 Janoary 2020 fa tsy ara-dalàna ilay fitokonana nokasaina. Ho setrin'izany didim-pitsarana izany, nanasonia fanambaràna mandrisika ny manampahefana mba hanaja ny zon'ny mpiasa ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena miisa 23.
Tsy niraharaha ny fandraràna ny mpiasan'ny NagaWorld mihoatra ny 1000 tamin'ny 9 Janoary, fa niroso tamin'ny fikasany voalohany hanatontosa hetsi-panoherana ivelan'ny hotely. Maro ihany koa ireo tsy mpikambana ao amin'ny sendika no nivoaka ny tranobe ary nanohana ireo mpiasa nanao fitokonana izany mitaky karama araka ny tokony ho izy, fepetran'asa tsara kokoa ary ny famerenana amin'ny toerany ny filohan'ny sendikàn-dry zareo. Misy amin'ireo sora-baventy tao amin'ny hetsika no mivaky hoe: “Stop Exploitation at Nagaworld” [Atsaharo ny fanambakàna ao amin'ny Nagaworld], “Stop Discrimination Against Unions” [atsaharo ny fanilikilihana ny Sendikà] ary ny hoe “Demanding living wages is a right not a crime” [Zo fa tsy heloka ny mitaky karama mahavelona].
Nanao fihetsiketsehana androany maraina ny mpiasan'ny casino ao amin'ny Naga world mitaky amin'ny orinasa hamela ny iray amin'ireo solontenany hiverina amin'ny asany
Nivoaka hanatevin-daharana ireo mpiasa manao fitokonana ao amin'ny NagaWorld ireo sefo sy lehiben'ny stand. Nahazo tehaka am-pitsanganana avy amin'ny mpiasa, izay mbola manohy miantso ny hamerenana an'i Chhim Sithar lehiben'ny sendikà, ny fanehoam-piraisankina avy amin-dry zareo ireo.
Fitokonana eo ivelan'ny NagaWorld androany… Maro ireo mpiasa milamina etsy ankilany, ary ireo polisy nindramina nanao fanamiana vaovao etsy andaniny
Tamin'ny 10 Janoary, nanatevin-daharana ny solontenan'ny fitantanana ao amin'ny NagaWorld ny manampahefan'ny governemanta ary niditra tamin'ny fifampiraharahana tamin'ny mpiasa manao fitokonana. Nandritra ny fifampiresahana, notaterina fa nanaiky ny hampakatra ny karama ny ao amin'ny fitantanana ary hamerina an'i Chhim Sithar. Nifarana araka ny tokony ho izy ny fitokonana ary niverina niasa ny mpiasa tamin'ny 11 Janoary.
Notsongain'ny fampitam-baovao ny tenin'ny lohandohany ao amin'ny sendikà nilaza fa nanaiky ny hampakatra ny karaman'ny mpiasa manomboka amin'ny 18 ka hatramin'ny 30 isanjato ny ao amin'ny fitantanana. Araka ny nolazain'ny loharanom-baovao ihany, nandoavan-karama tanelanelan'ny 150 ka hatramin'ny 250 dolara amerikana isambolana ny mpiasa talohan'ny fitokonana. Miovaova eo anelanelan'ny 130 sy 150 dolara amerikana isam-bolana ny karama farany ambany ao Kambôdza.
Nankalazain'ny mpanandratra ny tenin'ny mpiasa izao vaovaon'ny fahombiazana izao, satria ankanifisana izany hoe hetsi-panoherana lehibe ataon'ny mpiasa izany ka vita milamina ao Kambôdza. Ohatra, naparitaky [mg] ny polisy ankerisetra ny fitokonan'ny mpiasan'ny fanenoman-damba tamin'ny taona 2014.
Saingy taratra fa mbola tsy nilaza ny teniny farany ny orinasa: tao amin'ny filazana iray navoakan'ny NagaWorld tamin'ny 10 Janoary, raha nanome antoka ho an'ireo mpandray anjara ao aminy izy io “fa mbola araka ny tokony ho izy ny asam-pandraharahana rehetra ao amin'ny Vondrona ary manantena ny Filakevi-Pitantanana fa tsy hisy fiantraikany ratsy amin'ny asam-pandraharahana ny raharaha voalaza etsy ambony [ny fitokonana io].”, nofariparitany ihany koa fa “famoriam-bahoaka tsy ara-dalàna” ny nataon'ny mpiasa miisa 500 ka hatramin'ny 700 ary tsy nilaza na inona na inona mihitsy izy tamin'ny fifanarahana tolokevitra fampakarana karama.
Amin'izay toa-javatra izany, mbola manjavozavo ihany raha mbola ho voasazy ihany ny mpiasa noho ny fanitsakitsahana ny didim-pitsarana izay milaza ny fihetsiketsehana ho tsy ara-dalàna.
Fitokonan'ny mpiasan'ny hotely sy casino Naga. Sary avy amin'ny Foibe Kambojiana misahana ny zon'olombelona